Marar badan, aad u badan tahay in laga badiyay xog muhiim ah ee aad taleefan Huawei. Waxaad qorsheeyo laga yaabaa in la soo celiyo dib warshad, rujin telefoonka Huawei, cusboonaysiiso firmware, iyo wixii la mid ah. Haddii aadan ku sameeyeen gurmad aad telefoon Huawei ka hor, aad shaki khasaari doonaa xogta. Si aad u fogaado, waa lagama maarmaan in la sameeyo gurmad Huawei ah. Waxba ma ahan wixii dhaca, waxaad soo celin karaa ka hayaan si fudud. In this article, waxaana idin tusin 2 habab si gurmad iyo soo celinta telefoonada Huawei.
Habka 1. Samee Huawei ee kaabta iyo Soo celinta la Tool No
Habka 2. kaabta iyo Soo Celinta Huawei la MobileGo
Sida aad ogtahay, music, video, sawiro, waraaqaha waxaa lagu badbaadiyey kaarka SD, taasoo si fudud u heli karo sabab u Android nooca furan. Just buuraha telefoonka Huawei sida drive adag dibadda ee computer iyo furi card SD in ay gurmad xogta aad doonayay in computer. Markaas, waxaad had iyo jeer soo celin kartaa telefoonka Huawei mar walba.
Hoos waxaa ku tutorial ah u fudud in ay dib u soo celinta iyo telefoonada Huawei. Raac waxa.
Tallaabada 1. qaada ah cable USB Android in ay ku xidhmaan telefoonka Huawei in computer.
Tallaabada 2. computer doono si deg deg ah lagu ogaadaa oo la aqoonsado telefoonka Huawei oo dalka buuraha leh oo ah drive dibadda adag.
Haddii aad telefoonka Huawei ku guuldareysto in la ogaado, in aad u baahan tahay si loo soo dajiyo darawalka sida ay model telefoonka aad kombiyuutarka.
Tallaabada 3. your computer, heli drive dibadda adag ee aad Huawei iyo furi. Waxaad arki doontaa wax folder Phone ah oo guji. Hadda, kaarka SD ah oo dhan files oo fayl u muuqataa idinka soo hor jeedda.
Tallaabada 4. Sida caadiga ah, music, video, sawiro badbaadiyey ee Music, Video, Movies, Photos, DCIM, Pictures fayl. Tag fayl kuwaas oo nuqul aad files doonayo iyo badbaadin your computer.
Haddii aad u badbaadiseen waraaqaha ah ee aad taleefan Huawei, waxaad tagi kartaa gal inaad halkaas iyaga oo gurmad badbaadin computer.
Tallaabada 5. Marka aad lumiso, kuwaas oo music, video, sawiro, iyo waraaqaha, waxaad isticmaali kartaa si la mid ah si ay dib u hesho.
Habka 2. kaabta iyo Soo Celinta Huawei la MobileTrans
Thanks to Android nooca furan, tahay inay awoodaan inay si fudud gurmad aad iyo soo celinta music, video, sawiro, dokumentiyo ku saabsan telefoonka Huawei. Si kastaba ha ahaatee, ma dhammaan xogta ku badbaaddeen kaarka SD ah. Xiriirada, xogta app app, jadwalka taariikhda, abuse call oo kale ayaa la badbaadiyey on xasuusta telefoonka aad. Si gurmad xogta sida, waxaad dooran kartaa aan ahayn in ay caawimaad ka qaar ka mid ah qalab dhinac saddexaad weydii. Wondershare MobileTrans waa gurmad lagu kalsoonaan karo software, taas oo aad u saamaxaaya in ay gurmad iyo soo celinta xiriirada, app, xogta app, jadwalka taariikhda, music, video, sawiro, SMS iyo wac Guda 1 click.
Sida loo kaabta iyo Soo Celinta Huawei Phones?
A Windows iyo computer Mac
Tallaabada 1. Run MobileTrans iyo Connect Your Huawei Phone in Computer.
First of dhan, download iyo rakibi MobileTrans on your computer. Waxa maamula. Connect telefoonka Huawei in computer iyadoo la isticmaalayo cable USB ah. Marka xiran, telefoonka Huawei la soo bandhigi doonaa furmo suuqa hoose.
Iyadoo version Windows ah, oo aad ku xidhi kartaa telefoonka Huawei badan WiFi. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in la rakibo MobileGo app qasban tahay inay leeyihiin ku saabsan telefoonka Huawei keligaa.
Tallaabada 2. kaabta Huawei kori Y, kori P6, iyo More
In uu furmo suuqa hoose, u tag Tools aad jeceshahay waxaa laga yaabaa in qaybta guji kaabta One-click. Tani waxay kor u soo Bixiyaa suuqa kala gurmad. By default, dhammaan waxyaabaha aad awoodo gurmad waxaa lagu saxay. Waxa kale oo aad uun sax karaan kuwa aad u doonayay.
Clik Browse in ay doortaan badbaadiyo jidka u faylka gurmad. Markaas, guji Back Up in gurmad aad telefoon Huawei in computer.
Tallaabada 3. Soo Celinta Huawei kori P6, kori Y, iyo More ka File ee kaabta
On galeeysid bidix, guji Qalabka> Soo Celinta. Suuqa ayaa Celinta soo booda. Dhammaan hayaan aad la dhigtay MobileGo ku qoran yihiin baxay. Sax mid aad rabto iyo dooran faylasha sida aad doonayso inaad ku xaq. Ka dib markii in, u tag geeska hoose ee midigta iyo guji soo celi.
> Resource > Android > 2 Siyaabaha kaabta iyo Soo Celinta Huawei Phones